Melite Apple ID Settings On iPhone? Nke a bụ ihe ọ pụtara & Ihe ị ga-eme - Iphone
esi eweghachi ụlọ ahịa ngwa
kedu ihe ọ na -ewe ogologo oge iji budata ngwa
Melite Apple ID Settings On iPhone? Ihe ọ pụtara & Ihe ị ga-eme!
Gị iPhone na-ekwu 'Melite Ndenye Apple ID' na ịchọrọ ịhapụ ọkwa ahụ. N'agbanyeghị ihe ị na-eme, ị gaghị enwe ike ịnweta ọbara ọbara, '1' okirikiri ga-apụ n'anya. Aga m enyere gị aka melite ntọala Apple ID na iPhone gị ma gosi gị otu esi edozi nsogbu ahụ ma ọ bụrụ na ozi a agaghị agabiga .
Why Why My iPhone Say “Melite Apple ID Settings”?
Gị iPhone na-ekwu 'Melite Ntọala Apple ID' n'ihi na ị ga-abanye na Apple ID gị ọzọ iji nọgide na-eji ụfọdụ ọrụ akaụntụ. Imelite ntọala NJ Apple ga-enye gị ohere iji ọrụ ndị ahụ. Ọtụtụ oge, nke a pụtara na ị ga-agbanyeghachi paswọọdụ Apple ID gị na iPhone!
Ihe ị ga - eme mgbe ọ na - ekwu 'Mmelite Ntọala NJ Apple' Na iPhone gị
Mepee Ntọala ngwa na enweta na Melite Apple ID Settings . Mgbe ahụ, pịa Gaa n'ihu na-esote na ihuenyo. Tinye Apple ID paswọọdụ mgbe mmapụta na-egosi na ihuenyo.
Ọtụtụ oge, “Mmelite Ntọala Apple ID” ga-apụ mgbe ị banyere paswọọdụ Apple ID gị. Agbanyeghị, n'okwu ole na ole, ọkwa ahụ agaghị apụ n'anya, ị nwedịrị ike ịnweta pop-up na-ekwu na mperi ahụ mere. Nọgide na-agụ iji mụta otu esi edozi nsogbu a!
Bụ 'Mmelite Apple Ntọala Ntọala' Nọgidesiri?
O di nwute, ikekwe i huru edemede a n'ihi ozi a Melite Apple ID Settings rapaara na 2020. Ọ bụrụ na ozi ngosi pesky a rapaara na iPhone gị, ọ nwere ike ịbụ n'ihi na enweghị ike ikwenye Apple ID gị. Kwere m - ọ bụghị naanị gị na-emeso nsogbu a!
Ọtụtụ ndị òtù anyị iPhone nyere Facebook aka wetara anyị mbipụta a, nke a mere anyị jiri chọọ ịdegara gị edemede a. Soro usoro dị n'okpuru iji chọpụta ma dozie ezigbo ihe kpatara mmelite Nwelite Apple ID Ntọala agaghị apụ!
Gbaa mbọ hụ na ị banyela na Apple ID ziri ezi
O kwere omume na enweghị ike ikwenye Apple ID gị n'ihi na ị banyere n'ime akaụntụ Apple ID dị iche ma ya mere ịbanye paswọọdụ na-ezighi ezi. Mepee ngwa Ntọala wee pịa aha gị n'elu ihuenyo ahụ iji hụ na ị abanyela na Apple ID ziri ezi. Ga-ahụ Apple ID ị abanyela ugbu a n'akụkụ etiti ihuenyo ahụ.
iphone 5 etinyeghị kaadị SIM
Lelee ederede anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka na-agbanwe Apple ID gị !
Banye na Laghachi na Apple ID gị
Ọ bụrụ na ịbanye gị Apple ID ziri ezi, gbalịa ịbanye na ịlaghachi na ya. Laghachi na Ntọala -> Apple ID ma pịgharịa gaa na ala Pụọ . Tinye Apple ID paswọọdụ na enweta Gbanyụọ .
Na-esote, pịa Pụọ n'aka nri nke ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ idobe otu Apple News gị ma ọ bụ ntọala ndị ọzọ, gbanye ntụgharị gaa n'aka nri nke atụmatụ ahụ n'okpuru Debe Otu. Kwenye mkpebi gị site na ịpị aka Pụọ mgbe mmapụta ahụ pụtara.
iphone na -ewe oke ụgwọ
Ugbu a ị banyela, pịa Banye na gị iPhone na nso elu nke ngwa Ntọala. Tinye email ID Apple na paswọọdụ gị, wee pịa Banye na elu aka nri nke ihuenyo ịbanye banye iCloud. Ọ bụrụ na a kpaliri gị ka ịmekọrịta data gị na iCloud, ana m akwado ịkwado njikọ, naanị iji jide n'aka na ị gaghị efunahụ ozi ọ bụla dị mkpa.
Ekele - ị banyere iCloud ọzọ! Ọ bụrụ na Mmelite Apple ID ntọala bụ ka igosi elu, gafere nzọụkwụ ikpeazụ.
Lelee Ọrụ iCloud
O kwere omume na ọkwa a rapaara n'ihi na ọrụ iCloud nwere nkwarụ nwa oge maka mmezi oge niile ma ọ bụ usoro melite. Mgbe nke a mere, enwere ike igbochi gị ịbanye na Apple ID dịka nchekwa. Ị nwere ike lelee ọnọdụ sistemụ Apple na weebụsaịtị ha!
kedu ihe kpatara elekere apple m anaghị agbanye
Ntọala NJ Apple: Ruo Oge!
Gị Apple ID ntọala na-ruo ụbọchị na na manụ ngosi na-arahụ maka ugbu a. Oge ọzọ ọ na - ekwu Nwelite Apple ID Ntọala na iPhone gị, ị ga - ama ihe ị ga - eme! Ọ bụrụ n’inwee ajụjụ ọ bụla gbasara Apple ID gị, nweere onwe gị ịhapụ okwu n’okpuru.